Qixa Muhammadﷺ nama Rabbi abdate lafti tun baadhattee hin beettu.Qophii: Osman Abduletif - NuuralHudaa
Namuu dadhabbii waan qabuuf hirriibni dafee fudhate. Ergamaan Rabbiitisﷺ rafee ture. Namni diinaa tokko carraa tanatti fayyadamee ergamaa Rabbii ajjeesuuf suuta deemaa dhufee mataa ergamaa Rabbii gubbaa dhaabbate. Ergamaan Rabbiiﷺ dafee itti dammaqe. Dammaquus garuu humaa godhuu hin dandeenye. Namtichi hidhannoo guutuu qaba. Ablee harkaa qabu ergamaa Rabbiitti aaggatee “eenyuu narraa si dhoorka?” ja’ee gaafate. “Allaah” ja’een ergamaan Rabbii.
Ergamaan Rabbiiﷺ “Rabbi malee haqaan gabbaramaan tokkolleen akka hin jirreefi an ergamaa isaa tahuu ni amantaa? Ragaa ni baataa?” ja’ee gaafate. “Lakkii” ja’e namtichi. ‘Abadan kanatti hin amanu’ jechuu isaati. “Garuu as booda akkaan sitti hin duulle waadaan siif seena, warra sitti duulu waliinis hin tahu” ja’e namtichi. Ergamaan Rabbiiﷺ dhiifama godheefii gad dhiise.
Nagayaafi Rahmanni Rabbii sirratti haa jiraatu yaa Muhammadoo. Qixa kee nama Rabbi abdate lafti tun ba’attee hin beytu. Dhugamatti ati goota. Nama du’aafi miidhama sodaatee karaa Rabbii gad dhiisee miti. Namni ergamaa Rabbiitti dhufe kun diina ture, sanuu ajjeesuuf yaale. Eega ergamaan Rabbii irra aanes akka harka hin kennine itti hime. Akkasii waliin garuu ergamaan Rabbiiﷺ haal duree tokko malee dhiifama godheef. Sahaabaa itti kaasee hin balleessine. Rasuulliﷺ dhiifama namaaf godhuun, garaa namaaf laafuun beekkama. Diin babal’isuuf qabsaawa malee hijaa mataa isaa bahachuuf hin lolu. Diinni itti dhihaatee gaaroommina isaa kana gaafa arku wal dorgomee Islaamummaa qeebale. Haala collee, amala gaarii guutuuf ergamaan Rabbiiﷺ ergame.
January 22, 2022 sa;aa 2:06 pm Update tahe